Vakadzi Polarized Sunglasses Laguna Bi-Magenta / Nhema - Hanukeii
Laguna Beach yanga iri chaiyo nzvimbo yakatikurudzira kuti tigadzire yedu Laguna magirazi ezuva kuunganidzwa. Zvatinoona zvakakosha zvikuru pamusoro peguta diki iri pamahombekombe mapako aro, mahombekombe uye mapako aro, rimwe nerimwe riine hunhu nesimba rakasiyana.
En Hanukeii Tine shungu dzemahombekombe, yekufamba tisina shangu pajecha, yekunzwa kuti nguva inokwana mukufamba nemumhenderekedzo yegungwa ndeyekusingaperi. Isu zvakare tine hushamwari hwemafashoni uye isu tinotsvaga kupfuudza nekuparadzira hunhu hwedu.
Yedu kuunganidzwa kweLaguna inesimba kwazvo nemabhichi matatu atakawana tichiyambuka Laguna Beach kubva kuchamhembe kuenda kumaodzanyemba. Kune rimwe divi, nzvimbo, ruvara rwemvura uye jecha reTreasure Island Beach, uko kwatakanzwa kuti taive munzvimbo yakanaka kuti tipe mangwanani-ngwanani yoga kirasi, kutora mafoto uye kuzorora pajecha uchiziva maonero akatikomberedza. Iyo tani, ingangoita nhema tema ye1000 Steps Beach jecha uye nhamba yemadiki madiki uye mihorowero yatinowana pakati pemakona akavanzika emahombekombe aya, akapa ruvara kune imwe yemhando yedu yeLaguna. Paive paRockpile Beach patakanzwa isu tiri kubata paradhiso. Iyi nzvimbo ine matombo, izere nemichindwe uye zvinomera ichiri chakavanzika kune vanhu vazhinji, sezvo isu takaita rombo rakanaka kuwana munhu panguva yekugara kwedu imomo, uye isu takanzwa kuti gungwa nderedu uye isu isu.
Isu takave nemukana wekucherechedza avo vanogeza uye vagari veko vaipinda iwo mazuva eLaguna Beach, takazvibvumira kutorwa nemanyorero uye aura yekuvimba kwevaCalifornians uye takasarudza kuti hatisi kuzoviga mienzaniso yedu mune imwechete maitiro; Magirazi edu ezuva ari pakati nepakati pemaitiro e retro uye nekate ziso kupedzisa, zvese zviri zvinoitika gore rino uyezve, zvinofanirwa kuve nazvo kune chero munhu anoda kutsika paLaguna Beach.